ठूला ठूला नेताले छोड्दै गएपछि माओवादीमा एक्लिएका प्रचण्डले के भने?Nepalpana - Nepal's Digital Online
नेपालपाना बैशाख २ २०७८
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अहिले एक्लिएका छन् । सहयोद्धा नेताहरुले धमाधम साथ छोडेपछि प्रचण्ड चिन्तित पनि छन् । नेताले साथ छोडे पनि जनताले नछोडुन भनेर जिल्ला जिल्ला चहारिरहेका छन् । यस्तो रातोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले माओवादीका नेताहरु एमालेमा जानु राम्रो संकेत नभएको बताए ।
यस्तो छ अन्तर्वार्ताको अंश
माओवादीबाटै निर्वाचित केही सांसदहरु एमालेमा गए । तपाईहरुले कारबाही पनि गर्नुभयो । यो निर्णयले माओवादी पार्टीलाई घाटा हुँदैन ?
हिजोदेखि हेर्दा १२–१५ वर्षको परिस्थिति र राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दा के बुझिन्छ भने जतिबेला हामी वैचारिक विचलनका विरुद्ध, सांस्कृतिक विचलनका विरुद्ध, व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपतामा मरिहत्ते गर्ने व्यक्तिप्रति हामी जहाँ–जहाँ उदार भयौं, त्यहाँ–त्यहाँ माओवादीलाई घाटा भएको देख्छु ।
खासगरी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको परिस्थितिमा जहाँ हामीले विचलनविरुद्ध राम्रोसँग संघर्ष गर्यौं, त्यसले जनतालाई र आम कार्यकर्तालाई पनि राम्रो सम्वोधन ग¥यो । जहाँ हामीले त्यस्ता प्रवृत्तिसँग सम्झौता गर्यौं, त्यतिबेला कार्यकर्ता र जनता निराश भएको देखियो ।
अहिले गएकाहरुमा वैचारिक विचलन त हुँदै हो, प्रतिक्रान्ति लोकतान्त्रिक विचलन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ती साथीहरु गए । त्यसकारण सांस्कृतिकरुपले पनि यो गम्भीर विचलन त हुँदै हो, यो साह्रै नराम्रो संकेत हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने, केही साथीहरु ट्रयापमा परेर पनि गएको देख्छु म । केही साथीहरु पदको लोभले पनि गएका छन् ।
त्यस्तो ट्रयाप के होला ?
धेरै छन् । म यो सबै त भन्दिनँ । तर, योबीचमा विभिन्न अडियो, भिडियोहरु बनाउने र मानिसहरुलाई फसाउने काममा बालुवाटार लागेको देख्छु । मुख्य कुरा चाहिँ साथीहरुमा वैचारिक विचलन आयो ।
उनीहरुविरुद्ध दृढतापूर्वक नै कदम चाल्नुपर्छ भन्ने ठानेर नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । यसले देशभरि आम कायकर्तामा नयाँ आत्मविश्वास र उर्जा दिएको छ । निराशा दिएको छैन । मलाई लाग्छ, यसले आउने चुनावमा होस् वा आन्दोलनमा हामीलाई घाटा होइन, फाइदै पुर्याैउँछ ।
हामीले गलत प्रवृत्ति, विचार र विचलनका विरुद्ध संघर्ष गरेर जाने कुरा जनताको हितसँग मेल खान्छ । विचलनसँग सम्झौता गर्ने कुरा देश र जनताको हितसँग मेल खाँदैन ।
बैशाख २, २०७८ बिहिवार ०८:२८:३६ बजे : प्रकाशित